Masking Ning domain name — MYSTERY ZILLION
Masking Ning domain name
ကျွန်တော်က Ning မှာဆိုက်တခု လုပ်ထားပြီး Godaddy မှာ domain name ဝယ်ထားပါတယ်။ အခု domain forward လုပ်လို့ရပေမဲ့ mask လုပ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် domain name ကိုရိုက်လိုက်ရင် Ning site ကိုရောက်သွားပေမဲ့ ခနလေးနေရင် domain name က Ning domain name ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ godaddy မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ setting တခုခု မှားနေပြီနဲ့တူတယ်။ Ning ကို godaddy ကဝယ်တဲ့ domain name နဲ့တွဲသုံးဖူးတဲ့ သူရှိရင် Ning domain ကိုဘယ်လို mask လုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာ မေးရမှန်းမသေချာ လို့ဒီမှာမေးတာပါ။ နေရာလွဲနေရင် sorry ပါ။
အဲလိုလုပ်ချင်ရင် $4.45 လိုရေးထားတယ်။ :2:
dR.cARBOn wrote: »
ဟုတ်။ ပေးပြီးပါပြီ။ ဒါကိုမရသေးတာပါ။
mkko wrote: »
ning ကို ပေးတာလား godaddy ကိုပေးတာလား
Both. About USD 30amonth to Ning for domain forwarding and ad removal and about USD 20 to godaddy for domain name.
I have just sentaPM to you. Thanksalot :77: